घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » कसरी एक डिजिटल घुमन्ते को रूप मा तपाइँको डिग्री कमाउन
संसारको यात्रा, तपाइँको ल्यापटप बाट काम गरीरहेको छ, र तपाइँको डिग्री कमाई को लागी तपाईले सोचेको भन्दा धेरै कम गर्न सकिन्छ।
डिजिटल घुमन्ते संस्कृति लाखौं मानिसहरु को दिल मा यथास्थिति बाट टाढा र जीवन मा आफ्नो बाटो कोर्ने सपना देखीएको छ।
सायद तपाइँ चीन मा अंग्रेजी पढाउन वा बाली मा सूर्य मुनि bask गर्न चाहानुहुन्छ।
जहाँ पनी तपाइँको सपना गन्तव्य हुन सक्छ, तपाइँ यात्रा र एक क्यारियर निर्माण को बीच छनौट गर्न को लागी छैन। वास्तव मा, दुई सजिलै संग सद्भाव मा coexist गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सम्म कि तपाइँ तपाइँको जीवन शैली लाई अझ सजीलै प्राप्त गर्न मा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ सिक्न मा रुचि राख्नुहुन्छ कसरी एक डिजिटल घुमन्ते बन्न स्कूलमा हुँदा, पढ्नुहोस्।
एक डिग्री छान्नुहोस् कि रिमोट काम मा अवसर छ
यदि तपाइँ एक डिजिटल घुमन्ते बन्न चाहानुहुन्छ, तब तपाइँ एक प्रमुख छनौट गर्न को लागी तपाइँ लचीला क्यारियर अवसरहरु दिनुहुनेछ। बरु एक क्षेत्र छ कि तपाइँ अर्को ४० बर्ष को लागी एक कार्यालय को काम मा बाँध्न को लागी, अधिक डिजिटल आधारित उद्योगहरु लाई विचार गर्नुहोस्। तपाइँ प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटि or वा लेखन मा जान सक्नुहुन्छ। तपाइँ पनी शिक्षा मा तपाइँको डिग्री कमाउन सक्नुहुन्छ विदेश मा अंग्रेजी पढाउन को लागी तपाइँको प्रमाणपत्र लाई बढावा दिन।
त्यहाँ धेरै लचिलो अनलाइन प्रोग्रामहरु छन् कि तपाइँ स्कूल मा रहन को लागी मद्दत गर्नुहुन्छ जब तपाइँ यात्रा गर्नुहुन्छ। तपाइँ एक को लागी आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ निजी विद्यार्थी loanण शिक्षण र अन्य खर्च को लागी धन प्राप्त गर्न। निजी loansण को बारे मा सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि तपाइँ कसरी तपाइँ उधारो पैसा खर्च गर्नुहुन्छ मा अधिक स्वतन्त्रता छ। त्यहाँ पनि अधिक भुक्तानी व्यवस्था अवसरहरु छन् कि तपाइँ स्नातक पछि लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
तपाइँ आफ्नो खुट्टा भुइँमा राख्न को लागी विदेश मा बस्ने को बारे मा तपाइँको कल्पनाहरु उडान लिन्छन्। विदेश मा जीवन गाह्रो हुन सक्छ, र त्यहाँ धेरै दैनिक चुनौतिहरु तपाइँ एक विदेशी को रूप मा पराजित गर्न को लागी छन्। मुद्रा रूपान्तरण दरहरु को लागी भाषा बाधाहरु बाट, त्यहाँ धेरै चीजहरु छन् तपाइँ काम र स्कूल को शीर्ष मा जुगल गर्नु पर्छ। तपाइँ आफ्नो यात्रा गन्तव्यहरु को लागी भिसा आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी राम्रो हुनेछ। धेरैजसो देशहरुमा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरीका एक विद्यार्थी वा काम भिसा मा छ। यो अंग्रेजी पढाउन को माध्यम बाट हुन सक्छ, एक au जोडी वा एक भाषा स्कूल मा पाठ को लागी साइन अप गर्दा तपाइँ तपाइँको कलेज शिक्षा अनलाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ स्वतन्त्र यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ र जहाँ जिन्दगी ले तपाइँ लाई बस्न चाहानुहुन्छ, तर त्यो मात्र तपाइँलाई यति टाढा सम्म पुग्न सक्छ। तपाइँ एक डिजिटल घुमन्ते को रूप मा कहीं धेरै स्वतन्त्रता हुन सक्छ, तर तपाइँ अझै पनी तपाइँको भविष्य को लागी निश्चित लक्ष्यहरु को आवश्यकता छ। सबैभन्दा ठूलो कारण मध्ये एक यो हो कि प्रारम्भिक wanderlust पतन पछि शुरू हुन्छ, तपाइँ आफैंलाई या त homeick वा दिशाहीन महसुस पाउनुहुनेछ। जान्न को लागी तपाइँ कहाँ जान चाहानुहुन्छ, यो आर्थिक रूपमा सुरक्षित रहन गाह्रो हुन सक्छ।
भिसाको म्याद समाप्त हुन्छ, र जो कोहि धेरै देशहरुमा बस्न चाहान्छन् भिसा को बीच आफ्नो देश मा समय बिताउनु पर्छ। तपाईं अन्तरिममा कहाँ बस्नुहुन्छ? तपाइँ के गर्नुहुन्छ जब तपाइँ जरा तल राख्न चाहानुहुन्छ? के तपाईंलाई थाहा छ कसरी आफ्नो घर को रक्षा गर्न यात्रा गर्दा? तपाइँको अन्तिम लक्ष्य एक विदेशी देश मा नागरिकता कमाउन को लागी वा अब यात्रा को बीच मा अब र फेरि घर फर्कने हो? जसरी तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो विचारशील योजना को आवश्यकता पर्दैन चाहे तपाइँ कहाँ जानुहुन्छ वा तपाइँ के अध्ययन गर्नुहुन्छ।